Gịnị Bụ Oké Mkpagbu Ahụ? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Oké mkpagbu ahụ ga-eme ka ihe siere ụmụ mmadụ ezigbo ike otú ọ na-esitụbeghị mbụ. Amụmụ a e buru na Baịbụl gosiri na ihe a ga-eme “n’oge ikpeazụ,” ma ọ bụ ‘n’ọgwụgwụ oge.’ (2 Timoti 3:1; Daniel 12:4, Bible Nsọ Ọhụụ) Ọ ga-abụ “mkpagbu nke a na-enwebeghị ụdị ya kemgbe ihe ndị Chineke kere malitere ịdị ruo mgbe ahụ, a gaghị enwekwa ya ọzọ.”—Mak 13:19; Daniel 12:1; Matiu 24:21, 22.
Ihe ndị ga-eme n’oge oké mkpagbu ahụ
A ga-ebibi okpukpe ụgha. A ga-ebibi okpukpe ụgha n’otu ntabi anya. (Mkpughe 17:1, 5; 18:9, 10, 21) Ọ bụ Òtù Mba Ụwa, nọchiri anya ndị ọchịchị, ga-ebibi okpukpe ụgha.—Mkpughe 17:3, 15-18. *
A ga-alụso ndị Chineke ọgụ. Ọtụtụ mba ndị gbakọrọ aka ọnụ, a kpọrọ “Gọg nke ala Megọg” n’ọhụụ Ezikiel hụrụ, ga-agbalị igbukpọ ndị na-efe Chineke. Ma, Chineke ga-echebe ndị na-efe ya ka a ghara ibibi ha.—Ezikiel 38:1, 2, 9-12, 18-23.
A ga-ekpe ndị bi n’ụwa ikpe. Jizọs ga-ekpe ụmụ mmadụ ikpe. “Ọ ga-ekewapụkwa ndị mmadụ n’ebe ibe ha nọ, dị nnọọ ka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ n’ebe ewu nọ.” (Matiu 25:31-33) Ihe ọ ga-elekwasị anya kpee ikpe ahụ bụ mà anyị kwadoro “ụmụnna” Jizọs, bụ́ ndị ga-eso ya chịa n’eluigwe, ka ọ̀ bụ na anyị akwadoghị ha.—Matiu 25:34-46.
Ịchịkọta ndị ga-achị n’Alaeze. Ndị niile a họọrọ ka ha soro Kraịst chịa, ga na-ejere Chineke ozi ruo mgbe ha ga-anwụ, a kpọlite ha n’ọnwụ, ha agaa eluigwe.—Matiu 24:31; 1 Ndị Kọrịnt 15:50-53; 1 Ndị Tesalonaịka 4:15-17.
Amagedọn. Agha a bụ “agha nke oké ụbọchị nke Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.” A na-akpọkwa ya “ụbọchị Jehova.” (Mkpughe 16:14, 16; Aịzaya 13:9; 2 Pita 3:12) A ga-ebibi ndị Kraịst ga-ama ikpe. (Zefanaya 1:18; 2 Ndị Tesalonaịka 1:6-10) Ihe ọzọ a ga-ebibi bụ ọchịchị niile e nwere n’ụwa, bụ́ nke Baịbụl kọwara dị ka anụ ọhịa nwere isi asaa.—Mkpughe 19:19-21.
Ihe ndị ga-eme mgbe oké mkpagbu ahụ gasịrị
A ga-eke Ekwensu na ndị mmụọ ọjọọ ya agbụ. Otu mmụọ ozi dị ike ga-atụba Setan na ndị mmụọ ọjọọ “n’ime abis.” N’ebe ahụ, ọ ga-adị ka hà nwụrụ anwụ n’ihi na ha agaghịzi na-akpa ike. (Mkpughe 20:1-3) E nwere ike iji ọnọdụ Ekwensu ga-anọ na ya n’ime abis tụnyere onye nọ n’ụlọ mkpọrọ, ọ gaghịzi na-akpa ike.—Mkpughe 20:7.
Ọchịchị otu Puku Afọ ga-ebido. Alaeze Chineke ga-ebido ịchị ruo otu puku afọ. Ọchịchị ahụ ga-emere ụmụ mmadụ ọtụtụ ihe ọma na-enweghị atụ. (Mkpughe 5:9, 10; 20:4, 6) “Oké ìgwè mmadụ” onye ọ bụla na-enweghị ike ịgụta ọnụ ‘ga-esi n’oké mkpagbu ahụ pụta,’ jiri anya ha hụ mgbe ọchịchị Puku Afọ ahụ ga-amalite.—Mkpughe 7: 9, 14; Abụ Ọma 37: 9-11.
^ para. 5 N’akwụkwọ Mkpughe, Babịlọn Ukwu ahụ ma ọ bụ “oké nwaanyị akwụna ahụ,” nọchiri anya okpukpe ụgha. (Mkpughe 17:1, 5) Anụ ọhịa ahụ na-acha uhie uhie, bụ́ nke ga-ebibi Babịlọn Ukwu ahụ, nọchiri anya òtù na-anọchite anya mba niile dị́ n’ụwa, na-agbakwa mbọ ka ha dị n’otu. Mgbe mbụ òtù a pụtara, a kpọrọ ya Njikọ Mba Niile, ma a na-akpọzi ya Òtù Mba Ụwa.